Concerta® (ကွန်ဆာတာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Concerta® (ကွန်ဆာတာ)
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Concerta® (ကွန်ဆာတာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အာရုံစူးစိုက်မှုချို့တဲ့တက်ကြွလွန်းခြင်းရောဂါ ကိုကုသရာမှာသုံးပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းသဘာဝအတိုင်းရနိုင်တဲ့ ပမာဏကိုပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးအမျိုးအစားမှာပါပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အာရုံတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်စူးစိုက်ထားနိုင်ခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာများထိန်းချုပ်ပေးခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါ်တယ်။
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မသင့်မတင့်အသုံးပြုခြင်းက သေဆုံးခြင်းသို့ နှလုံးအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းတွေမှာ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ပါဝင်ဓါတုပစ္စညိးတွေကို ကြာရှည်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားပုံစံအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြာရှည်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားဖြစ်ပါတယ်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးကိုယ်ထဲကို တစ်နေ့တာလုံး
အစာနဲ့တွဲပြီးသို့အစာမပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ် ။ ဆေးတွေအားလုံးထုတ်လွှတ်ပြိးချိန်မှာ ကြာရှည်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားပုံစံက လုံးဝပျော်ဝင်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ သင့်သို့သင့်ကလေးမှာ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်း ဆေးပြားအလွတ်ကို တခါတရံသတိထားကောင်းထားမိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။
ဝါးစားခြင်း၊ ကျိတ်ခြေခြင်း ၊ချိုးပိုင်းခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကိုမျိုချသင့်ပါတယ်။ ဆေးပြားကိုချိုးပိုင်းလိုက်ခြင်းက တစ်ချိန်တည်းမှာ ဆေးတွေအများကြိးထုတ်လွှတ်လိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသုံးပြုနေစဉ်မှာ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အခြေအနေတိုးတက်လာမှုရှိမရှိအတွက်
ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ ကိုယ်အလေးချိန်အရပ်စတာတွေကို မကြာမကြာတိုင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာ သင်ဒီဆေးအသုံးပြုနေကြောင်း ခွဲစိတ်မယ့်ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်း ဆေးရပ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဆေးအသုံးပြုခြင်းက အကျင့်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အခြားလူတွေနဲ့ အထူးသြဖ်င့် ဆေးစွဲဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ အတူမျှဝေသုံးစွဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူ။ ရောင်းချခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းက တရားမဝင်ပါဘူး။
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Concerta® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ရေတိမ်ရောဂါ။ ကြွက်သားရုတ်တရက်တွန့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်ခြင်း၊ တင်းအားများခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်မသုံးသင့်ပါဘူး။
ကြွက်သားရုတ်တရက်တွန့်ခြင်း Tourette’s syndrome
တင်းအားများခြင်း၊ အပြင်းအထန်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်း၊ ( ဒီလက္ခဏာတွေက်ု ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုကိုတချို့လူတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အမျိုးသားအင်္ဂါထောင်မတ်ရာတွင် နာကျင်မှုရှိခြင်းသို့ ၄နာရီနှင့်အထက်
ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Concerta® (ကွန်ဆာတာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Concerta® (ကွန်ဆာတာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Concerta® (ကွန်ဆာတာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လတ်တလော Methylphenidateသို့ Methylphenidateမဟုတ်တဲ့အခြားလှုံ့ဆော်ပေးဆေးတွေကို မသုံးထားဘဲစအသုံးပြုမယ့်သူတွေအတွက် 18 or 36 mgတစ်နေ့တစ်ကြိမ်
5 mg Methylphenidate တစ်နေ့၂ကြိမ်သို့၃ကြိမ်
10 mg Methylphenidate တစ်နေ့၂ကြိမ်သို့၃ကြိမ်
15 mg Methylphenidate တစ်နေ့၂ကြိမ်သို့၃ကြိမ်
20 mg Methylphenidate တစ်နေ့၂ကြိမ်သို့၃ကြိမ်
အရင်ပေးထားတဲ့ Methylphenidateနေ့စဉ်ပမာဏအတွက် စအသုံးပြုသင့်သော Concerta®ဆေးပမာဏ
ဆေးအပြောင်းအလဲကို 72 mgနေ့စဉ်ထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လတ်တလော Methylphenidateသို့ Methylphenidateမဟုတ်တဲ့အခြားလှုံ့ဆော်ပေးဆေးတွေကို မသုံးထားဘဲ Concerta® စအသုံးပြုမယ့်သူတွေအတွက်-ကလေးများအတွက် နဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များအတွက် ( ၁၃နှစ်မှ၁၇နှစ်အထိ)18 mgတစ်ေနေ့တစ်ကြိမ်
Concerta® (ကွန်ဆာတာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေး့ပြား ကြာရှည်ထုတ်လွှတ်ပေးသောပုံစံ methylphenidate hydrochloride 18mg